किन खर्च भएन दाताको ४० अर्ब : यस्तो थियो सम्झौता - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
किन खर्च भएन दाताको ४० अर्ब : यस्तो थियो सम्झौता
शनिबार, साउन ७, २०७४
काठमाडौं – दातृ निकायले पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छैन । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
पुनर्निर्माणका लागि सरकारसँग सम्झौता गर्ने तर अनेक सर्त राखेका कारण उक्त रकम खर्च हुन नसकेको हो । दुई वर्ष ३ महिना बित्दा पनि पुनर्निर्माणका काम अलपत्र भइरहँदा दातृ निकायको यति ठूलो मात्रामा बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
अर्थसँग यस्तो सम्झौता
दातृ निकायले चालु, पुँजीगत र सार्वजनिक निर्माणका लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेका थिए । चालु खर्चअन्तर्गत विश्व बैंक, जाइका र भारत सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्ने भनेको रकम खर्च हुन सकेन ।
२ अर्ब ६ करोड फ्रिज
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार विश्व बैंकले १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमध्ये विभिन्न जिल्लामा ६ अर्ब १४ करोड खर्च भएको छ भने ४ अर्ब २९ करोड खर्च हुन सकेन । जाइकाले ६ अर्ब खर्च गर्ने भनेकोमा २ अर्ब ९३ करोड मात्र खर्च ग¥यो भने बाँकी २ अर्ब ६ करोड फ्रिज भएको छ ।
डिप्रेसनमा गोरे, जेल भित्र किन यस्तो गर्छन गोरे ?
काठमाडौ । काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कारागारको गोलघर...
प्रहरीको सुरक्षामा किन शंका लाग्यो गारेलाई ?
काठमाडौ । साढे ३३ किलो सुन तस्करीका मास्टरमाइन्ड भ...
काठमाडौ । करीब एक महिनादेखि नियमित उठ्न नसकेको का...
नेकपा: एक केन्द्रीय सदस्य, दुई गाउँपालिकाको जिम्मा
काठमाडौ । पार्टी एकतापछि केन्द्रीय सदस्यको संख्या...